कार्तिक ८, २०७८ सोमबार 243
मृ’त्यु यति अनौठो छ की जो मान्छेपिच्छे फरक छ । कसैको दुख’द निध’न हुन्छ भने कसैको म’हाप्रस्था’न हुन्छ । धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका वडा नं १० आहालेमा एउटा यस्तै घ’टना भएको छ । खोलाले बगाएर श्रीमान’को मृ’त्यु भए’को खबर सुनेपछि पी’डा स’ह’न नसकी श्रीमतीको पनि नि’ध’न भए’को छ।
फे’ला प’रेका राईको ला’श धरानस्थित वि पि कोरइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण गरी धरानको हरीयाली जंगलमा नेपाली काङग्रेस धनकुटाका नेताहरुले पार्टी’को झ’ण्डा ओ’ढा’एर सम्मा’न गरी अ’न्त्ये’ष्टी ग’रेका छ’न्।तर त्यो ख’बर पा’उनासाथ श्रीमतीको’पनि नि’ध’न भएको छ । उन’लाई हा’र्ट अ’ट्या’क भए’को अनुमान गरिएको छ ।राई नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशन अन्तर्गत गत महिना वडा अधिवेशनको क्रममा सागुरीगढी वडा नं १० बाट कांग्रेसको वडा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।
बिहीबार दिउँसो धरानको हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा श्रीमान–श्रीमती दुवैको एकैसाथ अ’न्त्ये’ष्टि गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव विजय सन्तोषी राई, कोषाध्यक्ष दिनेश राईलगायत नेताले पा’र्टीको झ’न्डा ओ’ढाएर उनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
Prevराता-रात भाई’रल बनेको यो भिडियो ,खिच्ने मान्छेलाई पनि पत्या’र लागेन ! आखिर त्यस्तो के छ यो भि’डियोमा ?
Nextछोरो पिङ खेल्ने डो रीमा श्रीमानले श्रीमतीलाई झु न्डाएर मा रे (भिडियो)